Sharciyada Waxbarashada Dalka oo La Hagaajinayo – Radio Muqdisho
Sharciyada Waxbarashada Dalka oo La Hagaajinayo
Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada, Maxamed Cabdulqaadir ayaa sheegay in wasaaraddu ay ku howlan tahay sidii loo xoojin lahaa shuruucda waxbarasho ee waddanku leeyahay.
Wareysi uu siiyay Radio Muqdisho ayuu agaasimuhu ku sheegay in sharciga waxbarashada dalka uu horyaallo baarlamaanka, kaddib markii ay ansixiyeen golaha wasiirada. Sharcigaas marka la anisixiyo dhaqan galintiisa waxaa ka dhalan doona shuruuc iyo nidaamyo kale oo lagu hagaajinayo tayada waxbarashada dalka.
Maxamed Cabdulqaadir ayaa tilmaamay in hannaanka lagu wajahayo hubinta heerka waxbarasho iyo hay’adaha ka shaqeeyaba ay tahay tallaabo muhiim u ah dowladda, si loo helo hay’ado waxbarasho oo tayo sare leh.
Wasaaradda Waxbrashada ayaa sanadkan qaadday imtixaanka dugsiga sare markii ugu horreysay muddo 20 sano ka badan, tallaabadaas waxaa soo dhaweeyay shacabka Soomaaliyeed, ayadoo ay wasaaraddu tilmaantay in la sii joogteyn doono.
Taliyaha Booliska Soomaaliya oo ku sugan Mareykanka